नेपालगञ्ज भर्सेज पेशावर – Sadarline
मध्यरातमा समाजवादी र राजपाको पार्टी एकता
जमुनाहा नाकामा स्थायी हेल्थडेस्क स्थापना हुने
रुपन्देहीमा पेस्तोलसहित ३ जना पक्राउ
सद्भाव समितिद्वारा गुरुनानकको ५५०औ प्रकाशवर्ष (जन्मजयन्ती) बाँकेमा भब्यताका साथ मनाईदै
झरना हेर्न गएका दुई किशोरको तलाउमा डुबेर मृत्यु
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघद्वारा ६२० थान पिपिई सहयोग
१४ मंसिर २०७३, मंगलवार १३:२५
पेशावर । पाकिस्तान नाम सुनेकाहरुका लागि यो नाम पनि नौलो नहोला । हुन पनि पाकिस्तानको पहिचानमा पेशावरको बिशिष्ट योगदान छ । अझ रोचक, मलाई यो शहर ठ्याक्कै नेपालगन्ज जस्तै लाग्छ । शहरको आफ्नो गन्ध हुन्छ । नेपालगन्जको र पेशावरको गन्ध मिल्छ । त्यसैले मलाई पेशावर पनि रमाइलो लाग्छ ।
नेपालगन्जको फेमस के छ? मानिसहरुका धेरै जवाफ हुन सक्लान् । हुनपनि शहर जति पुरानो भयो, त्यसका बिशिष्ठताहरु थपिदैं जान्छन् । फेमस भनेर सोध्ने बित्तिकै मान्छेको दिमागमा खानेकुरा, घुम्ने ठाँउ आँउछ । नेपालगन्जमा पनि त्रिभूवन चोकको रावडी र चाट धेरैको सिफारिसमा पर्छ । पहिलो पटक नेपालगन्ज आएको मान्छे त्रिभुवन चोक अवश्य जान्छ र पछि पनि नेपालगन्ज आउँदा चाट र रावडीको स्वाद लिन पटक पटक जान्छ । नेपालगन्ज विषम छ, गर्मी अत्याधिक, जाडो पनि त्यस्तै । त्यसैले, नेपालगन्ज मन नपराउने मानिसहरु पनि धेरै छन् । गर्मी र लामखुट्टे यसका कारण देखाउछन् मान्छेहरु । खुला नाली, जमेको ढल, फोहोर देखेर आगन्तुक नाक खुम्च्याउलान् तर जसलाई शहर मन प¥यो त्यसलाई नालीको गन्ध पनि मन पर्छ । अचम्म, पेशावरको मौसमपनि ठ्याक्कै नेपालगन्ज जस्तै छ ।
हरेक शहरसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै गीत हुन्छ, जसले शहर चिनाउँछ । नेपालमा पनि पोखरा, सुर्खेत, दाङ चिनाउने गीत भए झैं नेपालगन्ज चिनाउने गीत पनि छ । यो लेख लेख्नुअघि म कन्हैयादाई (नेपालगन्ज घर भएका चर्चित गायक सिंह परियार) सँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै थिएँ । कन्हैया दाईले २०५७ साल तिर एक गीत गाएका थिए, ‘नेपालगन्ज बजारैमा’ । यो गीतमा नेपालगन्ज ऐतिहासिक नगरी भएकाले घुम्न आउन भनिएको छ । हुन त गीतमा भनिएझैं वाटर पार्क÷रानी तलाउमा डुङ्गा सयर एकादेशको कथा भै सक्यो तर गीत भने सदावहार छ । यस्तै गीत पेशावर शहरको बारेमा पनि गाइएको छ । नेपालगन्जमा अवधि भाषा बोलिएझैं पेशावरमा पास्तो बोलिन्छ । पास्तो भाषामा श लाई ख उच्चारण गरिन्छ । पाकिस्तानका लोकप्रिय गायक इरफान खानले गाएको ‘पेखावर ओ पेखावर’ गीत यहाँको सर्वप्रिय गीत हो । उक्त गीतले भन्छ, ‘सन्सारमा धेरै शहर होलान्, ती मध्ये राम्रा पनि होलान् तर पेशावर जस्तो राम्रो शहर अन्त कतै छैन ।’
नेपालगन्जमा रावडी, चाट, लस्सी, विरयानी, सेकुवा भने झैं पेशावरका खानेकुराका आफ्नै बिशेषता छन् । यहाँको चिया विशेष मानिन्छ । हरियो चियापत्तीमा सुकमेल हालेर बनाइएको चियालाई स्थानीय भाषामा कावा भनिन्छ, जुन अतिथि सत्कारमा अनिवार्य जस्तै हुन्छ । पेशावरमा शेख कवाव, पेशावरी पुलाउ, अफगानी नान बिशेष परिकार हुन् । यसबाहेक, पेशावरी विरयानी, मटन टिक्का लगायतका खानेकुरा छन् । पुरुषले लगाउने गोलो टोपी (पकोल), पेशावरी चप्पल र छालाका ज्याकेट यहाँका नम्वरी सामान हुन् ।
हुन त पेशावर क्षेत्रफल र जनसंख्याका हिसाबले नेपालगन्ज भन्दा कैयौं ठूलो छ । यो महानगर हो, जसको जनसंख्या २० लाख बढि छ । खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा २५ जिल्ला छन् । जसको राजधानी पेशावर हो । अफगानस्तान सिमाबाट झण्डै ७० किलोकिटर मात्रको दूरीमा छ । पाकिस्तानका उत्कृष्ट मेडिकल कलेजहरु रहमान मेडिकल कलेज, नर्थ वेष्ट पेशावरमै छन् । अंग्रेजी माध्यममा पढाइहुने पेशावरका विश्वविद्यालय पनि यस देशका उत्कृष्ठमा पर्छन् ।
मुस्लिम वहुल पेशावरमा हिन्दु र शिख पनि उत्तिकै भेटिन्छन् । नेपालगन्जको बागेश्वरी मन्दिर जस्तै पेशावरमा काली मन्दिर, वाल्मिकी मन्दिर, गोरखनाथ मन्दिर प्रसिद्ध छन् । यहाँ सरकारी जागिर खाने मेरा एक साथी छन् – राजिन्दर हरिलाल । उनले नवरात्रमा पेशावरका मन्दिर घुम्न मलाई निम्ता समेत गरेका थिए । तर, दशैं मनाउन नेपाल जाने योजनाका कारण उनको निम्ता मान्न सकिंन । राजेन्दरका अनुसार पेशावरका हिन्दु चाडवाड एकदमै उत्साहका साथ मनाउने गर्दछन् ।
पेशावरका अर्का धार्मिक अल्पसंख्यक शिख हुन् । बाँके जिल्लामा रहेका अधिकांश शिख घरमा अवधि बोल्छन् । उनीहरुको मातृ भाषा अहिले अवधि भएको छ । शान्तिप्रिय र समुदायमा घुलमिल भएर बस्ने बाँकेमा सिख सम्प्रदायप्रति मेरो उच्च सम्मान रहेको छ, जसका कारण त्यहाँ रहँदा म बारम्बार नेपालगन्जको गुरुद्वारा घुम्न जान्थें । पेशावरका शिख पनि पास्तो भाषा बोल्छन् । स्थानीय पठानहरुको मातृभाषा पास्तोलाई पेशावरका शिखहरु आफ्नो पनि मातृभाषा हो भन्छन् । स्थानीय लवज र पहिरनका कारण शिख र मुस्लिमबिच बाहिरबाट हेर्दा त्यति फरक देखिँदैन । अक्टोबरमा म पेशावरको एक अस्पतालमा पुग्दा एक शिख स्वास्थ्यकर्मीसँग भेट भएको थियो । उनको दाँया हातमा भएको ‘कडा’ र ‘पगडी’ का कारण उनी शिख हुन् भन्ने मैले थाहा पाएको थिएँ । उनी स्थानीय पास्तो भाषामा बिरामीसँग कुरा गरिरहँदा उनी शिख हुन् भन्ने मलाई पनि पहिले अनुमान थिएन । उनका अनुसार पेशावरमा पनि गुरुद्वारा छन् ।
साहित्यले शहर चिनाउँछ । बरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सनत रेग्मीज्यूका कारण नेपालगन्ज चिनिएको छ । यसबाहेक नेपालगन्जमा उर्दू गजलकारहरु धेरै छन्, जो भारतका धेरै शहरहरुमा नेपालगन्जको चिनारी लिएर प्रस्तुत हुन जान्छन् । नेपालगन्जमा मुसायरा कार्यक्रम हुँदा पनि भारतका लखीमपुर, बहराइच, लखनउबाट सायरहरु आउँछन् । साहित्यकारले शहरको सम्बन्ध अझ आत्मिय बनाउँछन् । अझ आञ्चलिक÷मौलिक लेखकहरुले यसमा सुनमा सुगन्ध थप्छन् । स्वर्गीय गायकद्वय प्रेमप्रकाश मल्ल महेन्द्र मल्लका कारण नेपालगन्ज चिनिएको थियो । अवधिभाषी साहित्यकार आदरणीय सच्चिदानन्द चौवे लगायतले नेपालगन्ज चिनाउन खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ ।
पेशावर पास्तो साहित्यकालागि प्रसिद्ध मानिन्छ । यहाँका साहित्यकारहरुलाई अफगानस्तानमा समेत बडो सम्मान मिल्ने गरेको छ । स्वतन्त्रता सेनानी बच्चा खानको नाम पेशावरमा इज्जतका साथ लिइन्छ । उनको नामबाट यहाँ बिश्वविद्यालय, अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट र बजार बनेका छन् । भारतीय सिनेमाका चर्चित विनोद खन्ना, राजकपुर, दिलिप कुमार, जयन्त पेशावरमा जन्मेका थिए भनिन्छ । पेशावर सदरलाइनमा एक मित्रले साहरुख खानको पुख्र्यौली घर भन्दै सताब्दी पुरानो जस्तो देखिने एक घर देखाएका थिए । एक सय बढि पुस्तकका लेखक प्रोफेसर जाफर (स्वर्गीय) को नाम भारतमा समेत सम्मानका साथ लिइन्छ ।
नेपालगन्जलाई एकताका खेलाडीहरुको शहर भनिन्थ्यो । अहिलेपनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपाल चिनाइरहेका केही खेलाडिहरु नेपालगन्जका छन् । पाकिस्तान चिनाउने धेरै खेलाडिहरु पेशावरका छन् । क्रिकेटर साहिद अफ्रिदी, उमर गुल यासीर हमिद पेशावरी हुन् । स्क्वास खेलका बिश्व च्याम्पियन जहाँगीर खान, जानसेर खान पनि पेशावरी हुन् ।
मिडियामा पेशावरबारे राम्रो समाचार आँउदैन । हुनपनि यहाँ बारम्बार धमाकाहरु भै रहन्छन् । आतंककारी हमलाका कारण शहरको नाम भन्दा बदनाम धेरै छ । तर, पेशावर जीवन्त शहर हो । मानिसहरुको चहलपहल, भित्री बजारको भीड भडक्का, मोटरखाइकलको प्वाँ–प्वाँ सुन्दा नेपालगन्ज जस्तै लाग्छ । हुन त नेपालगन्जको सदरलाईन अलिक कन्जस्टेड छ, यहाँको सदरलाईन फराकिलो छ । तर, भित्री बजारमा पुगेपछि पसलबाट आउने जिरा धनिया मसलाको बासनाले एक्लैनी पुगेको भान हुन्छ । अझ सडक छेउका चाट पसल, सजाएर पसलमा राखिएका किसिम किसिमका मिठाई र बन्दै गरेका जिलेवीले सिधै त्रिभूवन चोक पु¥याउँछन् ।
अर्को रमाइलो पक्ष, भित्री बजारमा घोडाले तानिरहेका एक्का, गधाले तानिरहेका गाडा देखिन्छन् । यहाँ महिलाले लाउने बुर्काबाट उनीहरुको भौगोलिक निकटता थाहा पाइन्छ । मेरा एक साथीले बुर्काको रंग हेरेर महिला कहाँकी हुन् थाहा पाइन्छ भन्दा अचम्म लागेको थियो । उनका अनुसार पाकिस्तानी र पेशावरी महिलाहरु कालो बुर्का लगाउँछन् । जातीय इलाका (फाटा एजेन्सी) र अफगानस्तानबाट बिहेवारी भएर आएका महिलाहरु निलो या सेतो बुर्का ओढ्छन् ।
शहर बाहिर निस्केपछि इट्टा भट्टा देखिन्छन् । गधामा माटो बोकाएर लग्दै, कोही माटो मुछ्दै, कोही साँचोमा हाल्दै गरेको दृश्य अनि चिम्नीबाट धुँवा पुत्ताइरहेको दृश्य हेर्दा नेपालगन्ज बाहिर मनिकापुर, उदयपुर या मानपुर सोनपुर तिर पुगेजस्तो लाग्छ । खुला नाली, नालीबाट आउने दुर्गन्ध मलाई त नेपालगन्जमा जस्तो महसुस हुन्थ्यो यहाँ पनि त्यस्तै लाग्छ ।
इस्लामाबादबाट ६ लेनको मोटरबाटोले जोडेको झण्डै २ सय किमी उत्तर पश्चिमको शहर पेशावर आउन तीन घन्टापनि लाग्दैन । भौतिक पूर्वाधारमा पेशावर नेपालगन्ज भन्दा धेरै अव्वल छ । मलाई मन परेको यहाँको सडक सञ्जाल, भौतिक पूर्वाधार बिकास र उत्कृष्ठ शैक्षिक व्यवस्था हो । अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने हुनाले र पाकिस्तानको सरकारी भाषा अंग्रेजी हुनाले यहाँ सरकारी कार्यालयमा जो पनि राम्रो अंग्रेजी बोल्छ । भ्रष्टाचार त यहाँ पनि हुन्छ होला तर नेपालगन्जमा झैं सडक बनाउदै देखिने र महसुस हुने गरि यहाँ भ्रष्टाचार भएको देखिदैन । (लेखक पेशावरमा काम गर्छन् । ट्वीटरमा उनलाई @bhumibhai मा पछ्याउन सकिन्छ ।)
सदरलाइनडटकम १६ मंसिर. नेपालगन्ज : स्थानीय महिला नेतृत्वका लागि लैङ्गिक कानुन, नीति तथा योजना जर्तुमा प्रक्रिया विषयक तीन दिने तालिम नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ । सो तालिममा बाँकेका विभिन्न गाविसका २६ जना द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको सहभागिता रहेको थियो । महिला सशक्तिकरणको अवधारणा रहेका सम्बिधानका धाराहरु, स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता […]
२९ असार २०७५, शुक्रबार २०:११
१५ श्रावण २०७५, मंगलवार १६:५८